Horoscata tigra avy any Valencia - fomba fahandro tany am-boalohany | ThermoRecipes
Mandany ny fahavaratra any amin'ny tanàna mahafinaritra any Valencia izahay ary hatramin'ny nahatongavanay dia misy zavatra izay tsy mety hanjavona ao anaty vata fampangatsiahana ary izy io dia horoscope tigra Valenianina tsara. Zava-pisotro matsiro sy tena mamelombelona mangatsiaka be ary miaraka amina horonana mahazatra antsoina hoe "fartons".
Tamin'ity fahavaratra ity dia hitako fa miaraka amin'ny Thermomix® dia azo atao ao an-trano izany voajanahary sy tsy misy preservatives na loko artifisialy. Tigernuts, rano, siramamy, kanelina ary voasarimakirana ihany no tena tigernuts.
Satria tsy misy preservatives dia tsy mora ny mitahiry ronono voanjo tigra namboarina satria mety ho lasa marikivy. Ka raha manana ambim-bary ianao ary tsy handany azy amin'ny andro manaraka, ny zavatra tsara indrindra dia hatsiaka ary avoaka mandritra ny ora vitsivitsy alohan'ny hanompoana. Ho matsiro sy hamelombelona toy ny hoe vao vita.
1 Ahetsiketsika ny ronono voanjo
Zava-pisotro mamelombelona sy voajanahary tsy misy preservatives.
Fotoana fiomanana: 24H
Fotoana manontolo: 24h 1M
250 g ny voanjo tigra
1/2 cm. voasarimakirana (tsy voatery)
1/2 cm. ny hazo kanelina (tsy voatery)
1,5 l. rano mineraly mangatsiaka be
Ny andro talohan'io dia nanondraka ireo tigernuts izahay tamin'ny fanaronana azy ireo tamin'ny rano sy fanovana ny rano indroa.
Araranay ny tigernuts ary ataontsika ao anaty vera miaraka amin'ny siramamy, ny voasarimakirana sy kanelina.
Torotoro izahay mandritra 10 segondra amin'ny hafainganana 7-10.
Ampidinintsika ny sisa tavela amin'ny rindrina sy ny sarom-bilany ary manorotoro ny hafa indray isika 15 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 10.
Manampia rano mineraly handrakofana ny fangaro ary afangaro indray 20 segondra, amin'ny hafainganana 5-7-9.
Ampiarahinay ao anaty tavoahangy ny rano sisa tazomina, ataovy izay tsy hivoahan'ny ranoka ary afangaro mandritra izany 20 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4. Miandry segondra vitsivitsy vao manokatra ny sarony.
Misintona izahay amin'ny fampiasana sivana lamba na lamba landihazo na lamba gauze. Rehefa voasivana daholo ny ranoka dia tsindrio tsara ilay lamba mba hivoahan'ny rano.
Napetrakay tao anaty tavoahangy na siny ny horchata ary napetrakay tao anaty vata fampangatsiahana mba hampangatsiaka azy.
Manompo izahay rehefa mangatsiaka be. Tiako ny mamafy kanelina kely ambonin'ny tany.
Ny tsara indrindra dia ny fanamboarana azy amin'ny rano mineraly mangatsiaka be hahafahana misotro azy amin'ny fotoana na mandritra io andro io ihany.
Fanazavana fanampiny - ny Farton
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Misotro sy ranona, Celiac, Tsotra, Latsaky ny 15 minitra, Resipeo amin'ny fahavaratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Misotro sy ranona » Ahetsiketsika ny ronono voanjo
Efa te-hahazo tigernuts tsara aho ary hanandrana, amin'ny fidiranao anio dia mihasarotra ny miverina amin'ny fialan-tsasatra haha ​​toa mbola tao anaty terrasse aho :)
Sandrusca dia hoy izy:
Tena tsara be ilay izy! Ny olana dia eto Madrid aho dia toa tsy nahita tigernuts na aiza na aiza hividy azy ireo. Aiza no hahitako ahy aiza?
Mamaly an'i Sandrusca
Tsy haiko izay holazaiko aminao. Heveriko fa tany amin'ny magazay lehibe na fivarotana voanjo na tao El Corte Inglés, fa tsy haiko. Mandeha matetika any Valencia aho ary manararaotra ireo dia mividy tigernuts na zavatra kely hafa. Oroka.
ao amin'ny fivarotana vatomamy dia afaka mahita tigernuts tsy misy olana ianao
Amin'ny arabe Andrés Mellado 46 any Madrid. (Casa Ruiz betsaka)
fanisam-bahoaka dia hoy izy:
Angamba ho hitanao ao amin'ny Mercadona na any amin'ny Fitsarana Anglisy izy ireo, araka ny nolazain'i Elena.
Raha ny marina, nanandrana nanao horchata tao an-trano aho ary tsy tiako izany.
Nofantsihiko ilay izy ary nangoniko ary namboarina indray, saingy tsy nisy, tafintohina ihany aho.
Nanankarena ilay tsiro satria tiako ny tigernuts, fa ny firafiny, caxissssssssss, dia tsy araka ny noeritreretiko.
Mila milaza aho fa Valencien aho ary tiako ny horchata, saingy tsy misy, tsy mivoaka izany.
Valiny tamin'i Censi
Ianao dia tsy maintsy manivana azy amin'ny lamba tena tsara na sivana, manana kitapo kely nataoko tamin'ny lamba aho ary tena mahomby izany, azonao atao koa ny mampiasa gauze amin'ireo izay amidiny ao amin'ny farmasia, ny haben'ny napkin ka azonao atao izany ary mamintina tsara
Maria A. dia hoy izy:
Androany hitako io fomba fahandro io ary andramako izany satria tia horchata ny zanako lahy.
Nataoko indray mandeha izany ary tsy nivoaka tsara, dia toy ny be rano, nanandrana indray aho fa rehefa tsy nivoaka dia nilavo lefona. Manantena aho fa afaka milaza aminao aho fa nivadika ho tsara izany.
Valiny tamin'i Maria A.
Manantena aho fa tianao i María A., tena tianay ny horchata ary ny marina dia tianay ity fomba fahandro ity. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Sergio Oliver D. dia hoy izy:
Nivoaka kely koa io rano io.Raha hametrako tigernut betsaka kokoa na rano kely kokoa ve dia ho voavahiko?
Valiny tamin'i Sergio Oliver d
Raha mila tsiro mahery vaika kokoa ianao, dia aza ampiana rano kely. Ho ahy, ny tahan'ny idealy dia ampahany 1 amin'ny tigernut isaky ny rano 4, izany hoe amin'ity resipeo ity dia hisy tigreut 250 gr isaky ny rano 1 litatra.
Mirary fahavaratra !!
Salama Elena, efa nitady ireo bun any Valencien tonga mando ao anaty horchata aho fa tsy haiko hoe inona izy ireo, ato an-tranoko dia samy tia horchata be ny olona rehetra, novidiako foana io vita vita io nefa izao miaraka amin'ny resinao no hataoko amboary, azonao lazaina amiko hoe inona no antsoina hoe mofomamy ireo? Ary raha manana fanafody avy amin'izy ireo ianao? . Miandry ny valinteninao aho ary misaotra betsaka. FIARAHABANA
Ha, ary »VIVA LA BLANCA PALOMA»
Androany no mivoaka ny «Hdad d Huelva» hehehehe, tsy fantatrao izay miforona ao Huelva.
ary "Ho ela velona anie ny ando"
Salama Immaculate, "Fartons" no anaran'ireo muffins ireo ary manana fomba fanamboarana aho. Hiezaka aho hametraka azy tsy ho ela. Ho ela velona anie ny Rocío sy ny La Blanca Paloma !.
mako dia hoy izy:
Tena tsara ny vokany, nametraka ranomandry aho ary oram-baratra kely izany. Mahafinaritra, izaho irery tsy mametraka kanelina na voasarimakirana satria natao ho an'ny ronono meringue izany. Arahaba.
Mamaly an'i mako
Faly aho fa tianao izany, Mako! Mirary ny soa indrindra.
Salama Elena, tamin'ity herinandro ity aho dia namoaka voalohany tao amin'ny horchata "mahafinaritra", ity haitraitra ity.
Ao anaty recette fotsiny rehefa nandeha nanamboatra azy aho dia nilaza hoe 1/2 cm. hoditra voasarimakirana, apetrako amin'ny antsasaky ny voasarimakirana ny hoditro fa ny mavo ihany, ary ny kanelina kosa nametaka 1/2cm. Mametaka tapa-kazo 1/4 aho.
Tsy fantatro raha toa izany fa nivoaka tsara ary nitafy ny kiraronay isika, tsara izany nataoko indroa ... Hihaona tsy ho ela *****
Faly be aho fa tianao izany, Nuria52!. Manampy kely ny voasarimakirana sy voanjo kanelina aho satria tigernuts ihany no anaovana azy. Mirary ny soa indrindra.
Te hahafantatra aho, raha atsofoka anaty rano mafana na mafana ny tigernut dia alaina hydrate ve aloha? Resuslta fa androany tolakandro dia manana mpitsidika aho ary omaly alina dia adinoko ny nametraka azy ireo hilomano. Misaotra anao
Salama Rosa, ny marina dia tsy fantatro ary mbola tsy nanandrana aho. Ataoko anaty rano mangatsiaka foana izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Amin'ny maha-valzeniana ahy dia tiako ny horchata. Satria saika zazakely iray no nividianan'ny reniko azy tamin'ny fahavaratra tamin'ny horchateria ary nomeny hanina kely aho. Ankehitriny ataoko ao amin'ny tmx-ko izany ary mivoaka matsiro, tsy vitako izany voasarimakirana na kanelina.
Tiako koa, Ana! Matsiro. Mirary ny soa indrindra.
Tsara be !!! mihatsara kokoa ianao amin'ny fomba fanao tsirairay… izao no nanaovako ny horchata, nanana ny tigernut aho hatry ny omaly mba hilona… mmmmmmmm !!! Tsy azoko an-tsaina hoe ho lasa matsiro be ilay izy ... Nataoko tsy nisy kanelina sy voasarimakirana (na dia nisalasala be aza aho) fa ny tiako indrindra dia ilay avy amin'ny «la jijonenca» (franchise glace) ary ilay iray. tsy mandray, satria nanokan-tena aho tamin'ny farany hanao azy irery miaraka amin'ny tiger sy siramamy ... indrisy fa tsy nanana ny fomba fanao amin'ny fartons koa aho satria raha izany dia azo antoka fa hanao onja aho amin'ny snack… .jijijijij, misaotra indrindra amin'ny fizarana ny fomba fanamboarana, miarahaba
Faly be aho fa tianao izany, Pascu!. Ary kisendrasendra fotsiny izany! Nandosoko fotsiny ireo tigernuts mba hanao ilay horchata rahampitso. Mirary ny soa indrindra.
eny, kisendrasendra fotsiny !! voasarimakirana sy kanelina no nanaovanao azy? efa nataonao siramamy sy tigernuts ihany ve? Efa nanao fotoana vitsivitsy aho, izao manomana hafa ... mmmmm
Salama paska, mazàna dia tsy amin'ny tigernuts sy siramamy ihany no anaovako azy, fa indraindray kosa te-hanampy tapa-voasarimakirana sy kanelina aho hanome azy tsiro hafa. Mirary ny soa indrindra.
Salama, raha te-hanaingo azy avy amin'ny voanio aho, firy ny voanio tokony apetrako? mitovy ny habetsany sa mihoatra? Misaotra anao
Salama Risell, azafady fa tsy afaka manampy anao aho. Tsy mbola nanandrana nanamboatra azy tamin'ny voanio mihitsy aho ary tsy fantatro ny isany. Mirary ny soa indrindra.
WENCESLAUS dia hoy izy:
Ny horchata an'ny tigra tonga lafatra, tena tsara. Raha miditra an-tsokosoko izy rehefa manazava ianao dia tsy misy ny vato mahatafintohina hoy izy ireo ao anaty hevitra.
Tsy nasiako ny voasarimakirana sy kanelina, novaiko ny siramamy ho an'ny fructose sy syrup sy Agave. Manararaotra ity fotoana ity aho hampahafantarana ny olona rehetra mitsidika ny bilaoginao fa manimba ny fihinanana siramamy, na fotsy na volontany. Azonao atao ny manontany ny namantsika google: vokatry ny fihinanana siramamy ary ho hitanao izay ho hitanao.
Valiny amin'i WENCESLAO
Nanana Thermomix aho nandritra ny herintaona sy tapany mahery, ary nanaraka ity tranokala ity aho nandritra ny herintaona sy tapany mahery. Tsy mbola nanolo-kevitra ny hanoratra fanehoan-kevitra aho, fa androany dia nanandrana ity recipe ity aho ary nahita ny vokatra dia tsy afaka nanohitra. Tsara alahelo!Sambatra aho mipetraka ao C. Valenciana ary noho izany dia mankafy ny "orxata" na aiza na aiza, fa toy izao ... tsy misy.
Misaotra anao tamin'ny hevitrao, Cristina. Faly be izahay fa tianareo izany. Eny, tsy maintsy manandrana ireo fartons ianao, matsiro izy ireo. Jereo, avelako anao ny fomba fahandro: http://www.thermorecetas.com/2012/08/09/fartons/ Ary raha sahy ianao, dia azonao atao ihany koa ny manandrana ny sasany amin'ny resinay miaraka amin'ny horchata http://www.thermorecetas.com/?s=horchata&submit=Buscar Misaotra ary beset!
Soraya dia hoy izy:
Tena nanjary tsara izany, afaka nanamboatra fomba fahandro tamin'ny voanjo tigra hitako tao amin'ny magazay ihany aho tamin'ny farany ary tsy fantatro ny fomba nanaovana azy ireo. ^ _ ^
Mamaly an'i Soraya
Tsara Soraya! Faly izahay fa afaka nankafy ireo tigernuts ireo ihany ianao tamin'ny farany 🙂 Misaotra anao nanoratra taminay sy nanaraka anay !! Famihinana
Sambo kafe sy kakaô